नयाँ भुक्तानी सेवाप्रदायक सेलपे आयो, कसरी काम गर्छ ?
काठमाडौं । नयाँ भुक्तानी सेवाप्रदायकले सेवा शुरु गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक सेलकम प्राईभेट लिमिटेडले सेलपे सेवा संचालनमा ल्याएको हो। मोबाइल तथा वेब एप्लीकेशनको माध्यमबाट विभिन्न भुक्तानी..
ग्लोबल आइएमई बैंकले हाथवे फाइनान्स कम्पनीलाई प्राप्ति गर्ने, चुक्ता पूँजी १० अर्ब ४३ करोड नाघ्यो
काठमाडौं । हाथवे फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडलाई प्राप्ति (एक्विजिशन) गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । मंगलबार आयोजित विशेष साधारण सभाले हाथवे फाइनान्स..
ग्लोबल आइएमई बैंकको नाफा ३३ प्रतिशतले बढ्दा, लाभांश क्षमता साढे २३ प्रतिशत
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३३ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ । बैंकले प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको..
ग्लोबल आइएमई बैंकले तीन दिनभित्र कर्जा दिने, ब्याज ९.९९ प्रतिशत
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले ९.९९ प्रतिशत ब्याज दरमा घर कर्जा योजना ल्याएको छ । घर कर्जा आवेदन प्रकृया पूरा भएको ३ कार्य दिनभित्र कर्जा प्रवाह गरिने बैंकले जनाएको..
Posted on Jul 28 2019
काठमाडौं । सानिमा विकास बैंकले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३२ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ । आफ्नो चौथो त्रैमासिकको रिपोर्ट प्रकाशन गर्दे बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ अर्ब २४ करोड ३३..
प्रभु बैंकको नाफा शतप्रतिशतले बृद्धि, साढे १९ प्रतिशत लाभांश सक्ने
काठमाडौं । प्रभु बैंकले शतप्रतिशतले नाफा बढाएको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ अर्ब ५ करोड नाफा गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको नाफा ९६..
अब फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्दा नेपालबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालबाट अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल विज्ञापन गर्दा भुक्तानीको वैधानिक ढोका खोलिदिने भएको छ। मौद्रिक नीतिबाट बैंकले यसका लागि कानुनी व्यवस्था गरिने बताएको छ। सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमार्फत्..
यस्तो आयो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि मौद्रिक नीति पूर्ण विवरण पढ्नुहोस्
काठमाडौं । गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले आज आर्थिक वर्ष २०७६ ७७ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति पढ्नुहोस् ..
अब बैंकमा सुनचाँदी राख्दा पनि ब्याज पाइने, नीतिगत व्यवस्था हुने
काठमाडौं।नेपाल राष्ट्र बैंकले सुनचाँदी राखेर ब्याज पाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याएको यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको हो। गभर्नर डा चिरञ्जिबी..
मौद्रिक नीति आज ४ बजे र्‍याडिसन होटलबाट सार्वजनिक हुने
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को मौद्रिक नीति आज बुधबार सार्वजनिक हुने भएको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिबाकोटीले बुधबार अपराह्न ४ बजे र्‍याडिसन होटल, लाजिम्पाटमा मौद्रिक नीति..
एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई पोखराका होटलमा ३० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड र पाखराको पार्दीस्थित होटल पोखरा ग्राण्डीबीच बैंकका सम्पूर्ण ग्राहकवर्गलाई होटल पोखरा ग्राण्डीका विभिन्न सेवा सुविधाहरुमा ३० प्रतिशत सम्मको छुट प्रदान गर्ने सम्झौता..
नेपालकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदायक बन्यो चिनियाँ कम्पनी
काठमाडौँ । चिनियाँ कम्पनी ‘युनियन पे’ले नेपालकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदायकको इजाजतपत्र हासिल गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैँकले केही दिनअघि युनियन पे इन्टरनेसनललाई उक्त इजाजतपत्र दिएको हो। अब युनियन पे..
कास्कीको पुरुन्चौरमा कामना सेवाको ९७ औं शाखा
काठमाडौँ । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले बैकिङ्ग पहुच नपुगेका ग्रामिण क्षेत्रहरुमा समेत आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै जाने उदेश्य अनुरुप गण्डकी प्रदेशको पोखरा महानगरपालिका वडा नं १९ स्थित पुरुन्चौरमा ९७..
सिटिजन्स् बैंकको नाफा डेढ अर्ब रुपैयाँ
Posted on Jul 21 2019
काठमाडौं । सिटिजन्स् बैंकले गत वर्ष १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६को विवरण अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१ प्रतिशत बढी नाफा आर्जन..
बाढी पहिरोका कारण बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्ने समय १५ दिन थप
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको सावा र ब्याज तिर्ने समय १५ दिन थपेको छ । राष्ट्र बैंकले बाढी पहिरोको कारण असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने साँवा ब्याज..
कुमारी बैंकका ५ नयाँ शाखा ई–उद्घाटन
Posted on Jul 14 2019
काठमाडौं । कुमारी बैंकले काठमाडौं बाहिर पाँच नयाँ शाखाहरुको ई–उद्घाटन गरेको छ। बैंकका संचालक समितिका अध्यक्ष अमिरप्रताप जब राणाले बैंकका संचालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायतका कर्मचारीको उपस्थितिमा, मोबाईल–प्रविधिमार्फत ई–उद्घाटन गरेका..
सनराइज बैंकको सिईओमा जनक शर्मा पौड्याललाई नियुक्त
काठमाडौं। सनराइज बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा जनक शर्मा पौड्याललाई नियुक्त गरेको छ। एक महिनाअघि बैंकले प्रमुख कार्यकारीमा निरज श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो। उनले करारपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि दुई जना सञ्चालकहरुले बिरोध जनाएका..
कुमारी बैंकका दुई शाखा थप
काठमाडौं । कुमारी बैंकले बिहीवार उपत्यकामा दुई शाखा एकसाथ सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले ललितपुरको झम्सिखेल र काठमाडौंको ठमेलमा शाखा शुरू गरेको हो । ठमेल शाखाको उद्घाटन बैंकका अध्यक्ष अमीरप्रताप जबरा..
प्रविधिमा लगानी बढाउन मर्जर, नियामकले असीमित समय दिँदैन :गभर्नर नेपाल
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जिबी नेपालले नियामकले नीति कार्यान्वयन गर्न असीमित समय नदिने बताए। गर्भनर नेपालले १० बर्षअघि ५० करोडको पूँजी २ अर्ब पुर्याउन असीमित समय दिँदा पालना नभएको..
मुक्तिनाथ विकास बैंकले खोल्यो एकैपटक ६ शाखा
Posted on Jul 07 2019
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले देशै भरी आफ्ना शाखा सञ्जालहरु विस्तार गर्ने क्रममा विभिन्न ठाउँमा एकैपटक ६ वटा शाखा विस्तार गरेको छ । काठमाडौं जिल्लाको टोखा तथा कीर्तिपुर, ललितपुर जिल्लाको बाडेगाउँ..
एनसिसी बैंकले घोषणा गर्यो १५ प्रतिशत बोनस शेयर
काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्ना शेयरधनीलाई १५.८९ प्रतिशत बोनस तथा बोनस शेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागि ०.८३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव..
प्राइम बैंकमा गाभिने भयो कैलाश विकास बैंक, स्वाप रेसियो कति?
काठमाडौं । प्राइम कमर्शियल बैंकमा राष्ट्रिय स्तरको कैलाश विकास बैंक गाभिने भएको छ । प्राइम बैंकले कैलाशलाई ९४ रुपैयाँको दरले मिसाउन लागेको हो । एक्वाएर गरेपछि प्राइम बैंकको नामबाट कारोबार हुने..
ग्लोबल आइएमइ र जनता बैंक मर्ज हुने, यसरी बन्ने छ नेपालकै ठुलो बैंक
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमइ बैंक र जनता बैंक आपसमा मर्ज हुने भएका छन् । दुबै बैंकका अध्यक्षले आज मर्जर सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । समझदारीत्रमा सेयर आदान प्रदान अनुपात (स्वाप..
साइन रेसुङ्गाले डाक्यो विशेष साधारणसभा, पूर्णिमा र भार्गवलाई गाभ्ने, २५% हकप्रद दिने
काठमाडौं। साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले विशेष साधारणसभाको मिति तय गरेको छ। बैंकको सोमबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले असार २७ गते विशेष साधारणसभा गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। उक्त साधारणसभाकालागि बैंकले असार..
बैंकरहरुलाई गभर्नरले किन भने लभ गर्नुस् ?
बजेटमा भएको सरकारको नीतिमा भएको आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग गर्ने भनेको मौद्रिक नीतिले हो । संसारमा जहाँ पनि त्यही नै हो । मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य हेर्ने हो भने मनमोहनको किताब..
अब सिधै इ–सेवामा एनआईसी एशिया बैंकको काउन्टरबाट डिपोजिट
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले बैंकको जुनसुकै शाखाको काउन्टरबाट आफ्नो इ–सेवा खातामा रकम सिधै जम्मा गर्ने नयाँ सुविधा ल्याएको छ । हाल ग्राहकले आफ्नो मोवाइल बैंकिङ वा इ–बैंकिङबाट मात्र रकम..
६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने बिज्ञापन गरेको कम्पनीलाई कर्जा प्रवाहमा राष्ट्र बैंकको रोक
काठमाडौं । अत्यन्तै न्यून ब्याजदरमा विभिन्न ब्यवसायका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने भन्दै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन निकालेको मार्केट पर्श ग्लोबल कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा रोक लगाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक..
काठमाडौँ । कलाका शुभचिन्तक विश्वनाथ भेटवाल २०१९ सालतिर पलाञ्चोक भगवती स्कुल काभ्रेमा पढाउनुहुन्थ्यो । नेत्रबहादुर थापाले लेखेको चार कक्षाको भूगोल पुस्तकमा थियो । नेपालको राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको चित्र । त्यसमा..
बैंकरहरुले राष्ट्र बैंकसँग के के मा मागे छुट (सूचिसहित)
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ‘बिग मर्जर’मा जानको लागि छुट माग गरेको छ । संघले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव पठाउदै राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका..
रिलायबल लाइफ एनसीएचएलसँग आबद्ध, लाईफ इन्स्योरेन्समा पहिलो
Posted on Jun 10 2019
काठमाडौं । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसबीच सम्झौता भएको छ। सम्झौता अनुसार रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले आफ्नो भुक्तानी सम्बन्धी कारोवारहरुलाई नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गरि डिजिटल..
Results 1896: You are at page4of 64